डा. केसीको अनसनस्थलमा प्रहरी हस्तक्षेप, रिले अनशनकारी हटाइए
काठमाडौँ, १५ माघ । प्रा.डा‍. गोविन्द केसी २१ दिनदेखि अनशनमा छन् । उनको समर्थनमा महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा सुरु भएको रिले अनशनस्थलमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । रिले अनशन बस्न चिकित्सकहरुले टाँगेको टेन्ट सुरक्षाकर्मीले हटाइदिएका हुन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवन अगाडि रिले अनशन भइरहेको स्थानमा रहेका डाक्टर, रेजिडेन्ट डाक्टर र विद्यार्थीहरु रिले अनशन बसिरहेका थिए । प्रहरी हस्तक्षेपसँगै अनशनकारीले खुला चौरमा अनशनलाई निरन्तरता दिने अनशनकारीले बताएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अस्पताल परिसरमा धर्ना, प्रदर्शन र अनशन जस्ता गतिविधि नगर्न अपिल गरेको थियो । अनशनकारीले सरकारी योजनामा नै अस्पताल प्रशासनले विज्ञप्ति निकालेको र प्रहरी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् । हस्तक्षेपमा उत्रिएका प्रहरी अधिकारीहरुले गृहको आदेशअनुसार हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
केसीको यो १६औं अनशन हो र अनशन सुरु गरेको आज २१ दिन बितिसकेको छ ।